venpal tegmental inရိယာ၌၎င်း၏ cotransmitter dynorphin ၏ antireward သက်ရောက်မှုများလျော့နည်းစေခြင်းအားဖြင့် Hypocretin (orexin) သည်အကျိုးကိုလွယ်ကူစေသည် - Your Brain On Porn
proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ
v.111 (16); 2014 ဧပြီ 22
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2014 ဧပြီ 22; 111 (16): E1648-E1655 ။
2014 မတ်လ 24 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1073 / pnas.1315542111
ယောဟနျသဒဗလျူ Muschamp,a,1 ယောနသန်သည်အေ Holland,b ဂျနီဖာအယ်လ် Thompson က,c ဂျော့ခ်ျ Voren,b Linda C. Hassinger,a Sara Onvani,a Theodore အမ် Kamenecka,b Stephanie အယ်လ် Borgland,c ရှင်ပေါလုဂျေ Kenny,b နှင့် ဝီလျံအေ Carlezon ဂျူနီယာa
"ကိုကြည့်ပါဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ် dynorphin နှင့် hypocretin ၏ cotransmission ၏ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍစာမျက်နှာ 111 အပေါ်အသံအတိုးအကျယ် 5765 ၌တည်၏။
"ကိုကြည့်ပါPNAS Plus အားသိသာဖော်ပြချက်စာမျက်နှာ 111 အပေါ်အသံအတိုးအကျယ် 5771 ၌တည်၏။
Hypocretin (orexin) နှင့် dynorphin ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်း neuromodulators ဖြစ်ကြသည်။ dynorphin အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက် mediates နှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ပြည်နယ်များရှိပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုသော်လည်း Orexin, အကျိုးသည်အလွန်အရေးကြီးသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ ဤအဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစား, နှစ်ဦးစလုံး peptides အတူတူပင်အာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်နှင့်အပြန်အလှန်များမှာ coreleased ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ orexin နှင့် dynorphin အတူတူ Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအတွင်းနှင့်ဤ colocalization ဆုလာဘ်, မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်ထကြွလွယ်သောကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်း coexpressed ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ orexin dynorphin ၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ antireward သက်ရောက်မှု occludes ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိသာထင်ရှားစွာကျွန်တော်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။
keywords: စွဲ, Kappa-opioid အဲဒီ receptor, ခံစားချက်, neurotransmission, စိတ်ဖိစီးမှု
Hypocretin (orexin) နှင့် dynorphin လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်ဆန့်ကျင်လုပ်ရပ်များနှင့်အတူ neuropeptides ဖြစ်ကြသည်။ dynorphin စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ပြည်နယ်များရှိပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုသော်လည်း Orexin, arousal နှင့်ဆုလာဘ်၏ပြည်နယ်များရှိပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်လုပ်ရပ်များရှိနေသော်လည်းဤ peptides အဆိုပါ hypothalamus အတွင်းတူညီ Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအတွက်ထုပ်ပိုးနေကြတယ်, ဖော်ပြသည်။ orexin function ကို၏နှောင့်အယှက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic (LH) ဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု blunts, ကိုကင်း-သွေးဆောင် Impulse ဖယ်ရှားနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ dynorphin function ကို၏ Concomitant ပြတ်တောက်ကဤအပြုအမူအပြောင်းအလဲများနောက်ကြောင်းပြန်။ ငါတို့သည်လည်း orexin နှင့် dynorphin ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) dopamine အာရုံခံ, orexin ပါဝင်သောအာရုံခံတဲ့ထင်ရှားတဲ့ပစ်မှတ်၏စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်ဆန့်ကျင်လုပ်ရပ်များရှိသည်ပြခြင်းနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA orexin ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် LH Self-stimulation အတွက်လျော့နည်းစေ ကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း dynorphin အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် coreleased dynorphin နှင့်ဖြင့်၏အကျိုးကိုတံခါးခုံ-မြှသက်ရောက်မှုဆုလာဘ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်အလိုလိုဖက်ရှင်လုပျဆောငျ occlude နိုင်သည့် orexin အားဖြင့်ထူးခြားတဲ့ဆယ်လူလာဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။
Orexin (arousal အားပေးအားမြှောက်1) နှင့် (အစားအစာများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး2, 3), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (4), နှင့်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားမှု (5, 6) ။ ဒါဟာ (အဓိကအားဖြင့် hypothalamus အတွင်းထုတ်လုပ်7), နှင့် orexin 1 အဲဒီ receptor မှာပြုမူ (နွားကို1R ကို) နှင့်နွားကို2အဆိုပါ midbrain ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) (အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့ R ကို (လည်း Hcrt-R1 နှင့် Hcrt-R2 အဖြစ်လူသိများ),8) ။ Dynorphin ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်, ကျယ်ပြန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ် (စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ9, 10) ။ Kappa-opioid အဲဒီ receptor (KORs) ၏ activation, အ receptors မှာ dynorphin လုပ်ရပ်များ (11), (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု attenuate နိုင်ပါတယ်12, 13) ကမကထပြုခဲ့ကြသည်လုပ်ရပ်များကနေတဆင့်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် midbrain dopamine အတွင်း (DA) စနစ်များ (14, 15) ။ လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်သူတို့၏ထင်ရသောဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများရှိနေသော်လည်းဤ peptides တွဲဖက်အတွင်းပြုမူစေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားရှိ၏ ဥပမာအားဖြင့်, orexin နှင့် dynorphin နှစ်ဦးစလုံး (အ hypothalamus ၏လျှပ်စစ်ဆွစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့နေကြတယ်16) ။ DA အာရုံခံကဲ့သို့ပင် orexin နှင့် dynorphin အာရုံခံ (ဆုလာဘ်များနှင့်ဖိအားများကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွသောတုန့်ပြန်မှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်17) ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များအပေါ် neuropeptide coexpression ၏ဤပုံစံ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုးကျိုးများနှင့် orexin နှင့် dynorphin အစဉ်အလာကိုအတူတူလေ့လာခဲ့ကြသည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလှည့်အတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူအပေါ်, ညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ တစ်ဦးတည်းကိုလေ့လာသည့်အခါအပြုအမူနှင့်အာရုံခံဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများပေးသောကြောင့်အခြားအပေါ်မှာတယောက် peptide ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ကြီးစိုးဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်ကျယ်ပြန့်မတူကွဲပြားအပြုအမူ phenotypes ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းတွေးဆနိုင်ပါသည်။ လွှမ်းမိုး dynorphin အချက်ပြယုတ်လျော့ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့် anergia ဖြစ်ပေါ်စေမည်သော်လည်းဥပမာအားဖြင့်လွှမ်းမိုး orexin အချက်ပြ, ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်ဆုလာဘ်ရှာမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအပြည်နယ်များစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများကဲ့သို့စိတ်ရောဂါရောဂါမှအဓိကဆက်စပ်မှုရှိသည်ကြောင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ Disorders သည်အဘယ်မှာရှိ, ငါတို့သည်ဘယ်လိုကဤ peptides ဆနျးစစျဖို့ရှာတစျယောကျတညျးနဲ့ပေါင်းစပ်အတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ကိုထိန်းညှိသော VTA DA circuit ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ microstructural အဆင့်မှာ peptide colocalization လက္ခဏာမှ EM သုံးအဖြစ် orexin-dynorphin စနစ်၏ pharmacological သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇကိုင်တွယ်ပြီးနောက်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် circuitry, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏ sensitivity ကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြောင်းအမူအကျင့်နည်းစနစ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ orexin နှင့် dynorphin ၏ဘယ်လို concomitant ရှိနေခြင်းဆုံးဖြတ်ရန် electrophysiology အသုံးပြုသောတစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ receptors မှာရန်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက် VTA DA အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သက်ရောက်သည်။
Orexin နှင့် Dynorphin Cotransmitters Are ။
ကျနော်တို့ (ချောင်း microscopy သုံးပြီး mouse ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်, perifornical နှင့် dorsomedial hypothalamus ၏တူညီသောအာရုံခံအတွင်း orexin နှင့် dynorphin ၏ coexpression အတည်ပြုခဲ့သည်18()သဖန်းသီး။ 1A) ။ မျိုးစုံက transmitter ကိုဖော်ပြကြောင်းအာရုံခံ၏တည်ရှိမှုသည်အခြားဦးနှောက်ဆားကစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့ပြီး coexpressed neurotransmitters ၏ဖြန့်ချိ (differential ကိုပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများမှာဖြစ်ပေါ်သော filtering ကိုယန္တရားများများအတွက်အာရုံကြောအခြေခံကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ19) ။ EM ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ orexin နှင့် dynorphin အတူတူ Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအတွင်း colocalized ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ copackaging အများစုဟာသာဓက immunolabeling တွေ့နေကျမဟုတ်သောအတွင်သို့မဟုတ်အနီးရှာတွေ့ခဲ့သည်ဘယ်မှာ unmyelinated, varicose axon ဖြစ်စဉ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကပ်လျက်အရေးပါ၌တွေ့သော်လည်းအာရုံခံဆဲလ်အသေကောင်အတွင်းမှာပဲသိသိသာသာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (ယင်း Golgi ရှုပ်ထွေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1 B နှင့် C) ။ Dendrites လည်းထိုအက transmitter ၏အလားအလာ dendritic လွှတ်ပေးရန်အကြံပြုခြင်း, နှစ်ဦးစလုံး peptides အဘို့အတွေ့နေကျမဟုတ်သောအ-ဆက်စပ်တံဆိပ်ကပ်ပါရှိသည်။ microstructural profile များကိုအနည်းငယ်ကိုအရေအတွက်ကအချိုးမညီ synapses (များလွှတ်ပေးရန်ဇုန်ပြင်ပရှိတည်ရှိသောကြီးမား (~100 nm) တွေ့နေကျမဟုတ်သောအမှာတည်ရှိပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး peptides အဘို့အတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အတူ axon terminal များကိုဖမ်းမိသဖန်းသီး။ 1 B နှင့် C), cotransmitters နှင့်အမျှနိဂုံးကြောင်း orexin နှင့် dynorphin function ကိုထောက်ပံ့ပေး, သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့အစား differential ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အကြိမ်ရေတစ် function ကိုအဖြစ်ထက်အတူတကွဖြန့်ချိနေကြပါတယ်။
Orexin နှင့် dynorphin အဆိုပါ hypothalamus ၏အာရုံခံအတွက် cotransmitters ဖြစ်ကြသည်။ (တစ်ဦးက, Far လက်ဝဲ) တောက်ပ-Field photomicrograph hypothalamus ၏ဧရိယာ (အနီ) orexin များအတွက်ဆန်းစစ်နှင့် dynorphin (အစိမ်းရောင်) immunoreactivity ပြသထားတယ်။ (တစ်ဦးက, Far ညာ) Two-ရုပ်သံလိုင်း image ကိုပေါင်းစည်း ...
Orexin ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆုလာဘ် Threshold-ဓာတ်လှေကားအကျိုးသက်ရောက်မှု Dynorphin ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။
transmitter ကိုစကားရပ်၏ဤထူးခြားသောပုံစံ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကျနော်တို့ orexin နှင့် dynorphin အချက်ပြအတွင်းပြတ်တောက်ပုံမှန်နှင့်ထစ်အငေါ့လှုံ့ဆျောမှုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းရှုပ်ထွေးအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ C57BL /6ခုနှစ်တွင် intracranial Self-stimulation ဖျော်ဖြေဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက် (ICSS) (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic (LH) ဆွနှင့်အတူအားဖြည့်20နွား), ပိတ်ဆို့ထားခြင်း1အလင်းကိုအဆင့်စဉ်အတွင်း n- (2-methyl-6-benzoxazolyl) -N "-1,5-naphthyridin-4-yl ယူရီးယား (SB334867) ကရူပီး (ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းထိုး-မှီခိုတိုးစေသောသဖန်းသီး။ 2A; ဆေးသောက်ရန်အဘို့အတလမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA: F3,12 = 4.44, P <0.02) ။ ICSS တံခါးခုံများတိုးလာမှုသည်ကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်း၊20) ။ ICSS တုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများထိခိုက်သောကြောင့်ဤအကြိုးသကျရော (သက်သာခြင်းသို့မဟုတ်အခြား nonspecific အပြုအမူချို့ယွင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ခဲ့သဖန်းသီး။ 2B; ဆေးသောက်ရန်အဘို့အတလမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA: F3,24 = 0.33, P > 0.80) ။
orexin ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆုလာဘ်တံခါးခုံ-မြှသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ dynorphin အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။ (Aနွားကိုမှာ orexin အချက်ပြ၏) ပိတ်ဆို့ထားခြင်း1SB334867 အားဖြင့် R ကို (0-30, ip / ကီလိုဂရမ် mg) ဆုလာဘ်လျော့နည်းသွားညွှန်ပြခြင်း, ICSS စမ်းသပ်မှုအတွက်ဆုလာဘ်တံခါး elevates ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု ...
SB334867 ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းဓာတ်လှေကား (ဘာသာရပ်များအချက်အကြား) မူးယစ်ဆေးအဘို့မဟုတ်,-binaltorphimine (norBNI) [Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA နှင့်အတူ pretreatment နေဖြင့်တားဆီးခဲ့သည်ဆေးသောက်ရန် SB (ဘာသာရပ်များအချက်အတွင်း) အပြန်အလှန်×: F3,24 = 3.98, P <0.01], KORs တွင်ကြာရှည်စွာဖြစ်ပေါ်သော dynorphin လုပ်ရပ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။10) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ orexin အချက်ပြ၏ဆုံးရှုံးမှုကို coreleased dynorphin ၏ငုပ်လျှိုးနေ antireward သက်ရောက်မှုထုတ်ဖော်ပြသကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးတည်း norBNI ၏အုပ်ချုပ်ရေးဆုလာဘ်တံခါးလျော့မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီသက်ရောက်မှုကို norBNI နှင့်အခြားရှေ့ပြေးပုံစံ KOR ရန် (များ၏ထူးခြားသော pharmacodynamics နှင့်ဆက်စပ်သောခံရနိုင်ပေမဲ့10), ဒါကြောင့်လည်း redundancy ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏လှုပ်ရှားမှု modulate သို့မဟုတ်) coreleased dynorphin အားဖြင့် (unopposed တစ်ဦးတည်း orexin သေံအတွက် phasic တိုးဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်ဆွ်ဆိုက်ကနေဆုလာဘ် signal ကိုသိရှိစေရန်မလုံလောက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်စဉ်များရှိကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပထမဦးဆုံးမှာမှောင်မိုက်တဲ့အဆင့် (စဉ်အတွင်း ICSS တံခါးခုံပေါ် SB334867 ဆန်းစစ်သူကိုတခြားသူတွေရဲ့အလုပ်အတူကိုက်ညီမှုထင်ရစေခြင်းငှါ21) ။ သို့သော် orexin function ကိုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များတို့၏အလင်းသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိအပေါ်မူတည်သည်ဟုအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်လျော့ကျစေသည်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ခြင်းအမှောင်ထဲမှာအဆင့်စဉ်အတွင်းသော်လည်းမအလင်းကိုအဆင့်စဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေအခါဥပမာအားဖြင့်, အစားအစာနှင့်ရေ (orexin KO ကြွက်တွေမှာသူတို့ရဲ့အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်22), ငါတို့သည်ငါတို့၏အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်အပေါငျးတို့သဖျော်ဖြေမှာအချိန်။
ICSS အပေါ်စနစ်တကျ SB334867 နှင့် norBNI အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်စေရန်, ကြွက်များ၏သီးခြားဆောင်များတွင် LH လှုံ့ဆော်ဖို့လျှပ်နှင့် VTA လမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ VTA သို့ SB334867 ၏ Microinfusion sensitivity ကိုဆုချယုတ်လျော့ညွှန်း, ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းသိသိသာသာတိုးစေ၏။ တစ်ဦးတည်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA norBNI ICSS တံခါးခုံပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့, (နောက်ဆက်တွဲ SB334867 ပြုတ်ရည်၏တံခါးခုံ-မြှသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့သဖန်းသီး။ 2C; မူးယစ်ဆေးအဘို့တလမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA: F3,9 = 10.98, P <0.01) ။ intracranial မူးယစ်ဆေးထိုးသွင်းစနစ်တကျမူးယစ်ဆေးထိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများဆုံးနှုန်းထားများကျိုးနွံလျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်လေ့ပေမယ့်, ဒီသက်ရောက်မှုစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမရောက်ရှိခဲ့ပေ (သဖန်းသီး။ 2D; မူးယစ်ဆေးအဘို့တလမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA: F3,9 = 1.03, P = 0.112) ။
Orexin နှင့် Dynorphin ဂီယာစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှု Impulse ။
Impulse Impulse ၏မြင့်မားအများအပြားစိတ်ရောဂါရောဂါ (တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေများ၏ဖိနှိပ်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်23) ။ စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းထုတ်ရန်တွေးဆသောကိုကင်းအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, အစ Impulse အတွက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်, (24) ။ အဆိုပါ ICSS စမ်းသပ်မှုအတွက် LH ဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် coreleased orexin နှင့် dynorphin များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ငါတို့အဲဒီနှစျခု neuropeptides အကြားအပြန်အလှန်အခြေခံ Impulse နှင့်ဤအပြုအမူအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါတွေးဆ။ Impulse အဆိုပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန် (5-CSRTT) တွင်အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ကြွက်များတွင် quantified နိုင်ပါတယ် (25) လူသားများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုသည့်စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အလားတူတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ အချိန်မတန်မီဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်တုံ့ပြန်သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်နိမ့်ဖြစ်လေ့နှင့် DA ဂီယာခြီးမွှောကြောင်းမူးယစ်ဆေး (အားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေနေသည်26) ။ ကျနော်တို့အလိုအလျောက်နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူဖို့ orexin-dynorphin စနစ်၏အလှူငွေဆနျးစစျဖို့ 5-CSRTT ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းအုပ်ချုပ်သည့်အခါ, SB334867 နောက်ထပ်အလိုအလျောက်အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှု (များ၏ပြီးသားအနိမ့်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချသဖန်းသီး။ 3A; F3,21 = 4.89, P <0.01) ။ ဤလျှော့ချမှုသည်တုန့်ပြန်မှုတိကျမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်F3,21 = 1.45, P = 0.25), တောင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းအောင်းနေချိန် (F3,21 = 0.91, P = 0.44), သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်ပြီးစီးခဲ့ (F3,21 = 1.46, P = 0.25), သူတို့ကယုတျညံ့သတိဝီရိယသို့မဟုတ်မော်တာစွမ်းရည်ကြောင့်မဟုတ်ကြကြောင်းညွှန်ပြ။ norBNI ၏အုပ်ချုပ်ရေး, သို့သော်, (တုံ့ပြန်အချိန်မတန်မီအပေါ် SB334867 ၏သက်ရောက်မှုပြောင်းပြန်သဖန်းသီး။ 3B; F3,18 = 0.45, P unopposed dynorphin ဂီယာသည်ဤ antiimpulsive သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြု = 0.71) ။ တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ် SB334867 နှင့်အတူပေါင်းစပ်ပေးထား, norBNI (တုံ့ပြန်မှုတိကျမှန်ကန်မှု၏အစီအမံအပေါ်မျှသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်F3,18 = 0.66, P > 0.58), အောင်းနေချိန် (F3,18 = 3.09, P > 0.06), ဒါမှမဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုစမ်းသပ်မှုအရေအတွက်ပြီးစီးခဲ့ (F3,18 = 2.38, P > 0.10) ။ SB334867 ဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကိုကင်းမှဖြစ်ပေါ်စေသောအချိန်မတန်မီတုန့်ပြန်မှုနှစ်ဆတိုးခြင်းကိုတားဆီးခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 3C; F6,24 = 5.84, P <0.01) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ orexin neurotransmission တစ် dynorphin- အထိခိုက်မခံထုံးစံ၌အခြေခံနှင့်ကိုကင်း - လှုံ့ဆော်အခြေအနေများနှစ် ဦး စလုံးအောက်မှာထကြွလွယ်သောအပြုအမူကိုထိန်းညှိနိုင်သက်သေအထောက်အထားပေး။
orexin နှင့် dynorphin ၏ချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Impulse အပြုအမူ။ (A) SB334867 မော်တာ Impulse ၏ 5-CSRTT ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှု attenuates ။ တိကျမှု, အစားအစာတောင့်ရယူရန်အောင်းနေချိန်နှင့်ခဲ့ကြသည်ချန်လှပ်စမ်းသပ်မှုတွေအရေအတွက်၏ဆောင်ရွက်ချက်များ ...
Dynorphin ဖျန်ဖြေသည်နွားအတွက်ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလျှော့ချ1R-Null ကြွက်တွေက။
(စွဲမှအားနည်းချက်သိသိသာသာထကြွလွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တိုးလာသည်နှင့် Impulse အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးစွဲပေါ်ပေါက်ရေးအထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆကြသည်23, 27) ။ ထိုမှတပါး, orexin ဂီယာနှင့် dynorphin ဂီယာလွတ်လပ်စွာ (အလွဲသုံးစားမှုကိုကင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိ်ပတ်သက်နေကြပြီ28-32) ။ ကျနော်တို့ orexin နှင့် dynorphin ဂီယာအကြားအပြန်အလှန်တိုက်ရိုက်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေကိုထိန်းချုပ်စေခြင်းငှါတွေးဆ။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကျနော်တို့နွားကိုချို့တဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောကြွက်များတွင်ဃကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာ1ရူပီး (နွားကို1R- / -) ။ အညွှန်းများကိုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးဒီ genotype ပြပွဲ၏ကြွက်သိသိသာသာနိမ့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (0.1-1 မီလီဂရမ် / ပြုတ်ရည်နှုန်းကီလိုဂရမ်) ဒါပေမဲ့ (အတူတူပင်အားဖြည့်အချိန်ဇယားအောက်တွင်အစားအစာဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန် unaltered သရုပ်ပြ33), ကိုကင်းဆည်းပူးနေအတွက်လျှော့ချအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လိုငွေပြမှုမှအလယ်တန်းမဟုတ်အကြံပြုခြင်း။ ထိုမှတပါး, နွားကို1R- / - ကြွက်ကင်းလက်လှမ်းများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးကနဦးအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပုံမှန်နှုန်းထားများပြသပေမယ့်ပြီးရင်လျှင်မြန်စွာ (ကိုကင်းဆည်းပူးနေအတွက်လျှောက်လျော့နည်းပြသ33) ။ ကျနော်တို့နွားကိုကနေတဆင့်ပြကြောင်းညွှန်ပြ, ပြုတ်ရည်နှုန်း 0.3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်တစ်ထိုးမှာဒီ phenotype အတည်ပြုခဲ့သည်1ရူပီး [ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူထူထောင်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသဖန်းသီး။ 4; Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ (ဘာသာရပ်များအချက်အကြား) ANOVA, genotype (ဘာသာရပ်များအချက်အတွင်း) မူးယစ်ဆေးကုသမှု×: F1,12 = 12.91, P <0.01] ။ norBNI နှင့်ကြိုတင်ကုသမှုသည်ပုံမှန် ICSS နှင့် SB334867 ကိုပေးသောကြွက်များတွင်ပုံမှန် ICSS နှင့်အပြုအမူကဲ့သို့အပြုအမူကဲ့သို့ပင် OX ရှိကိုကင်းကိုယ်တိုင်တစ်ပိုင်းတစ်စပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း1R- / - တဦးတည်း neurotransmitter စနစ်၏ function ကိုအတွက်မျိုးဗီဇ ablation ကနေထုတ်လုပ်တာအမူအကျင့်လိုငွေပြမှုသည်အခြားများ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ကယ်ဆယ်သောတစ်မူထူးခြားတဲ့ဥပမာပေးကြွက်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, နွား, အကြောင်းအကြံပြု1R- / - ကြွက်, dynorphin ၏ unopposed လုပ်ရပ်များကိုကင်းများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ attenuate နှင့်ဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့ကျသွားသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာလည်းနွားအတွက်1R+ / + (ထိန်းချုပ်မှု) ကြွက်, norBNI မမျှော်လင့်ဘဲကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့တဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်ထိုကဲ့သို့သောဒါခေါ် "တိုက်ရိုက်" striatonigral အလတ်စား spiny အာရုံခံအဖြစ်အာရုံခံ, nonorexin နေဖြင့်ဖြန့်ချိကြောင်း dynorphin ဖြစ်ပါသည်, ကိုကင်းစားသုံးမှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိပြီးအမှန်တကယ်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ norBNI သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနွားများတွင်တွေ့ရှိကင်း-ယူပြီးအပြုအမူအတွက်လိုငွေပြမှုပြောင်းပြန်အဘယ်ကြောင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ KORs နှစ်ခုလူဦးရေ၏တည်ရှိမှုကိုလည်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်1R ကို KO ကြွက်။ တနည်းအား KOR ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (ကိုကင်းဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေ34), မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပုံစံများကိုအထောက်အကူပြုပေးသော (17) ။ မည်သို့ပင်ဤဒေတာ orexin ၏သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ကြာချိန်သက်တမ်းတိုးရေး, ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့သော်လည်း dynorphin ၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ, ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လျှော့ချထုတ်လုပ်နဂိုအတိုင်း orexin အချက်ပြ၏မရှိခြင်းအတွက်မနိုင်ကြောင်းအကြံပြု dynorphin အချက်ပြ။
နွားသည်အတွက်ကိုလျှော့ချကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး1R ကို KO ကြွက် KOR ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။ နွားကိုမှာအချက်ပြ orexin ၏ချွတ်ယွင်း1ဒီအဲဒီ receptor ၏မျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်ခြင်းဖြင့် R ကိုကိုကင်းများ၏ဃ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ပြုတ်ရည်နှုန်း 0.3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) လျော့နည်းစေသည်။ ဤသည်လိုငွေပြမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည် ...
Orexin နှင့် Dynorphin VTA DA အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်ဟန်ချက်ညီဆနျ့ကငျြသူအကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုနိုင်သလား။
ဦးနှောက် hypothalamic orexin နှင့် dynorphin အာရုံခံဆီက input ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအဆောက်အဦအလားအလာနှစ်ဦးစလုံး peptides ထိတွေ့နေကြပြီး, အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်သူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုဤသို့ဘာသာရပ် (35, 36) ။ အရာတစျခု peptide များ၏သက်ရောက်မှုသည်အခြားသူတို့ကျော်နိုင်မှအတိုင်းအတာဖွယ်ရှိမြောက်မြားစွာတစ်ဦးချင်းစီ peptide ၏ဆွေမျိုးကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်အပါအဝင်အချက်များစွာသည်, extracellular အာကာသအတွင်းအသက်ရှည်နှင့်ပစ်မှတ်အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေအတွက်အဲဒီ receptor စကားရပ်အဖြစ်အကြားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် postsynaptic ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ receptors နှင့်၎င်းတို့၏ intracellular အချက်ပြယန္တရားများ။ Impulse နှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ် (အနည်းဆုံးတော့တစ်စိတ်တစ်ဒေသထဲမှာ, VTA အတွက် DA အာရုံခံအသုံးပြုပုံစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်26hypothalamic orexin ပါဝင်သောဆဲလ်), ထင်ရှားသောပစ်မှတ် (37) ။ ထို့အပြင် VTA သို့ orexin ၏ပြုတ်ရည် (မူးယစ်ဆေးရှာပိုကောင်းစေပါတယ်6) ။ VTA အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ peptide ၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့ orexin နှင့် dynorphin ထိတွေ့ C57BL /6mouse ကိုဦးနှောက်အချပ်အတွက် DA ဆဲလ်ကနေ electrophysiological အသံသွင်းလုပ် singly သို့မဟုတ်အတူတကွလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့သီးခြားစီလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်သာ inhibitory သက်ရောက်မှု dynorphin သော်လည်း, orexin (excitatory တစ်ပုံစံတည်းခဲ့သဖန်းသီး။5A နှင့် B; F2,50 = 18.95, P ≤ 0.01) ။ သေးငယ်တဲ့လူနည်းစုသာ orexin သို့မဟုတ် dynorphin မှရွေးချယ်တုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြသည်ပေမယ့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော DA အာရုံခံ၏လူဦးရေအတွက်, အများဆုံး (နှစ်ဦးစလုံး peptides ၏ပြင်းအား saturating မှတုန့်ပြန်သဖန်းသီး။ 5B) ။ ထူးခြား, နှစ်ဦးစလုံး peptides dual-တုံ့ပြန်မှုအာရုံခံ (ရန်လျှောက်ထားသောအခါn = 10), နှုန်းထားကိုပစ်ခတ်မအသားတင်အကျိုးသက်ရောက် (ရှိခဲ့သဖန်းသီး။ 5A), saturating ပြင်းအားမှာတစ် ဦး ချင်းစီ peptide ၏ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများ corelease အပေါ်သို့ထိရောက်စွာအချင်းချင်းပယ်ဖျက်ပစ်သည်ဟုအကြံပြု။ အာရုံခံဆဲလ် ၁၀ ခုတွင်လေးခုသည် oorxin တည်ရှိမှုရှိနေသော်လည်း dynorphin အားဖြင့် ဦး စားပေးတားစီးမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဆဲလ်တစ်ခုသည် dynorphin ရှိနေသော်လည်း orexin အားဖြင့် (> ၁.၅ ဆပြောင်းလဲမှု) ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည် (သဖန်းသီး။5A နှင့် C) ။ ပိုပြီးဆဲလ် dynorphin ထက် orexin မှတုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ယေဘုယျအား, နှစ်ဦးစလုံး peptides မှတုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြသည်သောသူတို့ကိုဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကို peptide ၏ဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးမှု VTA DA များ၏အစုကိုအတွင်းဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခဲ့အကြံပြုခြင်း, orexin နှင့် dynorphin coapplied သောအခါနှုန်းကိုပစ်ခတ်မကွန်ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့ အာရုံခံလေ့လာခဲ့သည်။
Orexin နှင့် dynorphin VTA DA အာရုံခံအပေါ်မျှမျှတတပေမယ့်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ (တစ်ဦးက, လက်ဝဲVTA DA အာရုံခံ (များ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းမကွန်ပြောင်းလဲမှုအတွက်) Coapplied orexin နှင့် dynorphin ရလဒ်n = 10) ။ singly လျှောက်ထား dynorphin inhibitory ခဲ့ orexin excitatory ဖြစ်ခဲ့သည်။ ...
နောက်ထပ် orexin နှင့် dynorphin နှစ်ဦးစလုံးမှအထိခိုက်မခံခဲ့ VTA DA အာရုံခံအတွင်းအလားအလာ orexin-dynorphin interaction က elucidate စေရန်, ကျနော်တို့ (SB334867 နှင့်အတူကုသမှုအားဖြင့်ရေချိုး-လျှောက်ထား dynorphin ၏ inhibitory သက်ရောက်မှုတိုးပွားရန်, တနည်း, ကြိုးပမ်းသင်္ဘောသဖန်း။ S2A; F5,25 = 2.13, P <0.01) သို့မဟုတ် norBNI နှင့်အတူကုသမှုဖြင့်ရေချိုး - လျှောက်ထား orexin ၏စိတ်လှုပ်ရှားသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန် (သင်္ဘောသဖန်း။ S2B; F3,27 = 5.48, P <0.01) ။ နှစ် ဦး စလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင် OX1R ကိုနှင့် KOR ပိတ်ဆို့ SB334867 နှင့် norBNI nonspecific လုပ်ရပ်များမှတဆင့်ဆိုးကျိုးများအားထုတ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ပို. အရေးကြီးသည်ဤဒေတာစသည်တို့အတွက်တစ်ဦးချင်းစီ peptide ၏သေံ SB334867 နှင့် norBNI တူသောအသေးစား-မော်လီကျူးရန်၏လျှောက်လွှာကလွှမ်းမိုးခံရဖို့မလုံလောက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကြီးမား peptide ပါဝင်သောတွေ့နေကျမဟုတ်သောအ exocytosis ပုံမှန်အားဖြင့် (သာအချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်သာမန်အားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်ကိုမမြင့်မားတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ကြိမ်နှုန်းမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းညွှန်ပြယခင်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်38).
norBNI တိုက်ရိုက်နွားကိုမှာ "ပယ်-ပစ်မှတ်" လုပ်ရပ်တွေကိုမှတဆင့်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမပြုခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုရန်1ရူပီးကျနော်တို့လာမယ့်နွားကိုပေါ်မှာဤရန်များ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်1R ကိုအချက်ပြ။ အထူးသကျနော်တို့လူ့နွားကိုဖော်ပြယဉ် cho ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ intracellular ကယ်လစီယမ်ယာယီသွေးဆောင်ဖို့ရေချိုး-လျှောက်ထား orexin တစ်ဦးက, SB334867, ဒါမှမဟုတ် norBNI များ၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ် fluorometric ပုံရိပ်ပန်းကန်စာဖတ်သူကို (FLIPR) assay ကိုအသုံးပြု1ရူပီး။ orexin တစ်ဦးက intracellular ကယ်လစီယမ် (EC ထဲမှာမျှော်လင့်ထားသည့်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ပေမယ့်50 = 0.01 μM) နှင့် SB334867 ထိုး-ရသည်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု (EC အ attenuated50 = 0.035 μM), norBNI intracellular ကယ်လစီယမ်အတွက်အခြေခံသို့မဟုတ် orexin ဖြစ်စေ A-evoked တိုးအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ဤသည် VTA DA အာရုံခံဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ် norBNI ၏သက်ရောက်မှုအဆိုပြုထား KOR အချက်ပြယန္တရားများမှတဆင့်တစ်ခုတည်းကိုသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မူးယစ်ဆေး, နွားမှာအဘယ်သူမျှမကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအကြံပြု1R ကို (39()သင်္ဘောသဖန်း။ S3 A-C).
VTA အတွက် Orexin-Dynorphin ဆက်သွယ်မှုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းညှိ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ electrophysiology လေ့လာမှုများ orexin နှင့် dynorphin အကြားပြောင်းလဲနေသော interaction က VTA DA လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိကွောငျးတငျပွနှင့် VTA အာရုံခံဖွယ်ရှိလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအပေါ် orexin-dynorphin စနစ်၏ဆိုးကျိုးများများအတွက် key ကိုအလွှာအဖြစ်အစေခံသော။ တိုက်ရိုက်ကဒီအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကြွက်များတွင်ဃကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် SB334867 ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ပြုတ်ရည်၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA မော်တော်ယာဉ်ပြုတ်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA SB334867 norBNI (ပိတ်ဆို့ခဲ့ကွောငျးကိုကင်းစားသုံးမှု၏သိသိသာသာလျှော့ချရေးဖြစ်ပေါ်စေသဖန်းသီး။ 6; တလမ်း ANOVA: F3,24 = 11.56, P <0.01), ဒီ ဦး နှောက်withinရိယာအတွင်း unopposed dynorphin လုပ်ရပ်များကင်းဆုလာဘ် attenuate ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ဤရလဒ်သည်အားဖြည့်အားဖြည့်မှုအားနည်းသောပုံသေအချိုး ၁ (FR334867) ဇယားများတွင်ကိုကိုမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုတွင်အပြန်အလှန် VTA SB1 ၏မရှိခြင်းကိုပြသခဲ့သူများနှင့်ကွဲပြားနေသည်။40) ။ သို့သော်အများအပြားအစီရင်ခံစာများ (တာဝန်တိုးတောင်းဆိုနေပြီအဖြစ်, SB334867 မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေလျှော့ချပိုမိုထိရောက်သောကြောင်းပြသကြ2, 33) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်ကြွက်များပိုမိုမြင့်မားအားထုတ်မှု FR5 အချိန်ဇယားကိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသောကြောင့်, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ဒီစာပေတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ VTA DA အာရုံခံဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ် orexin နှင့် dynorphin ၏ဆန့်ကျင်သဘာဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြုအမူတွေအပေါ်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများကွိုးစားအားထုစေခြင်းငှါတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။
VTA အတွက် Orexin-dynorphin interaction ကမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဖျန်ဖြေ။ ဒီသက်ရောက်မှုကို norBNI (334867 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) နဲ့ pretreatment အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA SB3 (ဘေးထွက်နှုန်း 10 μg) ကလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်n = 9) ။ ***P < ...
ကျနော်တို့ orexin နှင့် dynorphin, လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်နိုင်သော neuropeptides, တူညီတဲ့ Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအမှာတွေ့ရှိသည်ဟုသတင်းပို့ပါ။ ဤအ neuropeptides copackaged နှင့်ယူဆရအတူတူဇီဝကမ္မအခြေအနေများ (အောက်မှ coreleased ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်16ဒါကြောင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းအစဉ်အလာတစ်ဦးချင်းစီက transmitter ပေါ်တွင်အဓိကမူတည်အဖြစ် conceptualized စနစ်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်) အထိသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နွားကိုကနေတဆင့်ပြ, ထို orexin ကိုလည်းသရုပ်ပြ1ရူပီး၎င်း၏ cotransmitter dynorphin ၏သော့ချက်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု attenuates ။ Orexin-dynorphin အာရုံခံဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို (တုံ့ပြန်အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-Fos ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြ4, 6, 22), neuropeptide လွှတ်ပေးရန်မျက်နှာသာကြောင်းအာရုံခံ activation ၏မြင့်မားညွှန်ပြ။ ကျနော်တို့ထို့နောက် orexin ၏ corelease အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံအပေါ်လုပ်ရပ်တွေကနေတဆင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူအပေါ် dynorphin ၏သက်ရောက်မှု occlude နိုင်သောသက်သေအထောက်အထားသည်။ orexin ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (dynorphin- ထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ် KOR ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူပြောင်းပြန်ဖြစ်ကြောင်း ICSS နှင့်ကိုကင်း-related အပြုအမူတွေအပေါ် KOR agonist ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနိုင်ပါတယ်13, 41, 42) ။ အထီးကျန်တွင်ဤ peptides အသီးအသီး၏ယခင်လေ့လာမှုများသည်ဤကောက်ချက်ကိုထောကျပံ့: အ VTA သို့ orexin ၏တိုက်ရိုက်ပြုတ်ရည် (ရှာကြံမူးယစ်ဆေး reinstates6), KOR agonists ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ပြုတ်ရည်ထိုကဲ့သို့သော dysphoria အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ, (ထုတ်လုပ်သော်လည်း43) ။ ကျွန်တော်တို့သည်ဥပမာ [orexin ပုံမှန်အား VTA မှ excitatory ဆုလာဘ်-တုံ့ပြန်မှုသွင်းအားစုနှင့်အတူပြုမူကြောင်း prefrontal cortex နှင့်အခြားအဆောက်အဦများ (ထံမှအချိုမှု hypothesize44, 45)] ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ် forebrain DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်, DA အာရုံခံအပေါ် dynorphin နှင့်ဒေသခံဂါဘမြို့သားဂီယာ၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှားရန်။
ဒါဟာ orexin ဂီယာတိုးမြှင် KOR activation ၏စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုကိုထေမိနိုင်ပါလိမ့်ပုံဖြစ်သော်လည်း KOR ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးသက်သက်သာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (သို့ခြီးမွှောကျဆုလာဘ် function ကို) ထုတ်လုပ်ရန်မဟုတျကွောငျးကိုအလေးပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျနော်တို့ SB334867 နှင့် norBNI ၏ကွဲပြားခြားနားသော pharmacodynamic နှင့် pharmacokinetic profile များကိုရန်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်း hypothesize ။ ယခင်မူးယစ်ဆေးဂန္လှုပ်ရှားမှုနှင့်တစ်ဦးကိုပြသ t1 /2(~24 မိ၏46), အဆုံးစွန်သော၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးပတ်ဆက်ရှိနေသေးကြောင်း KORs ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းထုတ်လုပ်သော်လည်း (10) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, norBNI တူသောရှေ့ပြေးပုံစံ KOR ရန်တစ်ပြိုင်နက်ထိုကဲ့သို့က c-ဇွန် kinase ၏ကဲ့သို့သောအခြားအချက်ပြလမ်းကြောင်း, (ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ "ဘက်လိုက် agonists" များမှာ39), အားဖြင့်စူးရှသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် orexin သေံ၏အဆင့်မြင့် offset ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းအစားထိုးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်။ ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြန်အလှန်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ချက်ကတခြား intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်သို့ပြုမူမတိုသရုပ်ဆောင် KOR ရန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစောင့်ဆိုင်း; ထိုကဲ့သို့သောဒြပ်ပေါင်းများ (လက်ရှိမရရှိနိုင်ကြသည်10) ။ ထို့ပြင်လက်ရှိစမ်းသပ်ချက်ဟာ VTA အာရုံစိုက်နှင့် orexin နှင့် dynorphin များ၏သက်ရောက်မှုသည်အခြားအဆောက်အဦများအတွက် dichotomous ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် VTA orexin-dynorphin interaction ကအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်တစ်ခုတည်းသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းမပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ ဥပမာ, orexin စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ (အတူလိုက်ပါကြောင်းအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များဖန်တီးပေးသွားဖို့ dynorphin အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်40, 47) ။ ရှင်းနေသည်မှာအပိုဆောင်းအလုပ်အခြေအနေ, ခန္ဓာဗေဒ loci နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့် Paradigm အတွက် orexin နှင့် dynorphin အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆန့်ကျင် vs. ပူပေါင်းခွင့်ပေါ်လာကြောင်းယန္တရားများကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုလည်းနွားကိုဖြစ်စေ၏နှောင့်အယှက်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်ခုလုံး peptides ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု modulatory သောအမြင်ကိုထောကျပံ့1ရူပီးသို့မဟုတ် KORs လျှော့ချပေမယ့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အပြုအမူများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းမရှိပေ။ ဥပမာ, ICSS အပြုအမူတစ်ဦးတည်း orexin LH ဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင့်မှလုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းသရုပ်ပြပင် SB334867 မြင့်မားဆေးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေ orexin ICSS အပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်မပြုစေခြင်းငှါပေမဲ့, က dynorphin ၏လုပ်ရပ်များ offsetting ဖြင့်၎င်း၏ပြတ်တောက်များအားလျော့ပါးသက်သာစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ hypothalamic အာရုံခံ၏တူညီသောလူဦးရေအားဖြင့် orexin နှင့် dynorphin ၏ differential စကားရပ် VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုအသုံးပြုပုံအဖြစ်အတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်ရောဂါအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်သည့်အားဖြင့်တစ်ဦးယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, orexin mRNA အဆင့်ဆင့်ကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ phenotype (များတွင်ရလဒ်များကြောင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးအစားအောက်ပါလျော့နည်းသွားကြသည်48) နှင့်ကြွက် (49) ။ ဤသည်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ phenotype ကအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် unopposed dynorphin ၏လုပ်ရပ်များဆပ်ကြောင်း orexin စကားရပ်ထဲမှာလျှော့ချရန်, ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းစနစ်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အခြား in adapter တစ်ခုခြင်းဖြင့် counterbalanced စေခြင်းငှါကြောင့်ဤတွေ့ရှိချက်များ, အထီးကျန်မှုတွေအတွက် orexin နှင့် dynorphin နှငျ့ပတျသကျသောဒေတာများအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သူတို့ကအစ narcolepsy ထံမှစိတ်ဓါတ်များနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်အထိမမှန်ဆက်ဆံဖို့ကုထုံးမဟာဗျူဟာ၏ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် add လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, orexin ၏ dysregulation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေများကုသမှတစ်မူထူးခြားသောချဉ်းကပ် KOR function ကို manipulate မှဖြစ်လိမ့်မယ်, နှင့်, အပြန်အလှန်, ပြောင်းလဲ dynorphin function ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမမှန် orexin စနစ်များထိန်းသိမ်းရေးအားဖြင့်ထေခံရပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး C57BL / 6J ကြွက် (အသက်၏ 8 wk; Jackson ကဓါတ်ခွဲခန်း) EM စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုအုပ်စုတစ်စု-သျော (လှောင်အိမ်နှုန်းမှငါးသုံး) ကြ၏ ICSS အတှကျအသုံးပွုသောသူတို့အားခွဲစိတ်အောက်ပါ singly သျောခဲ့ကြသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး (350 ဂရမ်) Sprague-Dawley ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories) ကို 5-CSRTT နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်လေးယောက်အုပ်စုများ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ C57BL / 6J ကြွက် (postnatal ရက်ပေါင်း 19-21) ကို electrophysiology စမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုအဆိုပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအုပ်စုတစ်စု-သျော (လှောင်အိမ်နှုန်းမှငါးသုံး) တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ OX1- / - ကြွက်နှင့်၎င်းတို့၏ OX1+ / + ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများ Jackson ကဓာတ်ခွဲခန်းမှရရှိသောခဲ့ကြသည်နှင့်အ C6BL / 57 ကြွက်ကျော်ခုနစျပါးသားစဉ်မြေးဆက် backcrossed ကြ၏ littermates (အသက်၏6ပတ်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤကြွက်အုပ်စုတစ်စု-သျော (လှောင်အိမ်နှုန်းနှစ်ခု) တို့ဖြစ်သည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များတစ် 12-ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်အပူချိန်-controlled အခြေအနေများအောက်တွင်သျောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအလငျးသံသရာသို့ 4-5 ဇဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်အစားအစာနှင့်ရေကြော်ငြာ libitum ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ လုပျထုံးလုပျနညျးကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes နှင့်အညီကောက်ယူခဲ့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကိုလမ်းညွှန် (50) နှင့် McLean ဆေးရုံ, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်နှင့် Scripps ဖလော်ရီဒါ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
Immunohistochemistry နှင့် microscopy ။
orexin တစ်ဦးသို့မဟုတ် prodynorphin များအတွက် immunolabeling ချောင်းနှင့်ငွေ-တိုးမြှင့်ကိုရွှေ (ယခင်ကအစီရင်ခံလုပျထုံးလုပျနညျးအရသိရသည်အခြား mouse ကိုဦးနှောက်ကဏ္ဍများအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်51), နှင့်စံ EM protocol များတွင်အောက်ပါလုပ်ငန်းများ၌။ immunolabeled တစ်ရှူး Nonoverlapping ဒေသများထို့နောက်ကျပန်း ((ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes) ImageJ software ကိုသုံးပြီးအမှုန်များ၏အရေအတွက်များအတွက်ရွေးချယ်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ, Immunohistochemistry နှင့် microscopy).
patch pipettes (3-5 MΩ) 143 MM ပိုတက်စီယမ် gluconate, 10 MM Hepes, 0.2 MM EGTA,2MM MgATP, (0.3 တစ်ဦးသော pH နှင့်အတူ) 7.2 MM NaGTP နှင့် 270-280 MM mOsmol နှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ဒေတာကို 20 kHz မှာဝယ်ယူခြင်းနှင့် pClamp2software ကို (Molecular ဖုန်းများအတွက်) ကို အသုံးပြု. 10.0 kHz မှာ filtered ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖွဲ့လုံး-ဆဲလ်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလေ့လာဆည်းပူးပြီးနောက်ဆဲလ် -70 MV နှင့် (250-MV ခြေလှမ်းများအတွက် MV -60 မှ -130 ထံမှ 10 ms) ဗို့အားခြေလှမ်းများတစ်စီးရီးမှာဗို့အား-ရောက်သည်ခဲ့ကြသည် (hyperpolarizing detect လုပ်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့သည်Ih) ရေစီးကြောင်း။ Ih အဆိုပါဗို့ခြေလှမ်းလျှောက်ထားပြီးနောက် ~30 ms နဲ့ 248 ms အကြားလက်ရှိအတွက်အပြောင်းအလဲအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ VTA DA အာရုံခံ၏အခ်ါလှုပ်ရှားမှုလက်ရှိ-ညှပ် mode မှာတိုင်းတာခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်သောအခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းမှာအောင်မြင်သောအခါစမ်းသပ်မှုစတင်; အလွှာပြီးရင်5မိလျှောက်ထားခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အတု cerebrospinal fluid နှင့်အတူထွက်ဆေးကြောခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ 3-မိအစိတ်အပိုင်း၏နောက်ဆုံး5မိဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Dynorphin တစ်ဦးက (1-17; 200 nm) နှင့် orexin တစ်ဦးက (100 nm) အမေရိကန် Peptide မှရရှိသောနှင့်ရေစက်ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားပြင်းအားယခင်က (VTA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် saturating သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှတွေ့ရှိခဲ့သည်5, 52) ။ Thiorphan (1 μM) နှင့် (10 μM) bestatin, Sigma-Aldrich မှရရှိသောရေစက်ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့် dynorphin တစ်ဦးက (အတူလျှောက်ထားခဲ့သည်SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ, Electrophysiology).
FLIPR assay ။
OX1R ကိုလှုပ်ရှားမှု (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ FLIPR assay အားဖြင့် intracellular ကယ်လစီယမ်အဆင့်ကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်53()SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ, Fluorometric Imaging ကပြား Reader ကို assay).
ကြွက် ketamine / xylazine အောက်မှာ monopolar လှုံ့ဆော်လျှပ်သို့မဟုတ် cannulae (PlasticsOne) နဲ့ (အသီးသီး 80 နှင့် 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip, Sigma) ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ (အ LH မှ stereotactically ညွှန်ကြား18) နှင့် / သို့မဟုတ် contralateral VTA [bregma ထံမှ: anteroposterior (AP), -3.2 မီလီမီတာ; (ML) mediolateral, -0.5 မီလီမီတာ; dorsoventral (DV), အီရတ်ကနေ -4.7 မီလီမီတာ] ။ တစ်ဦး 7-ဃပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလပြီးနောက်ကြွက် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဦးနှောက်ဆွဘို့အတုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်18) ။ တုံ့ပြန်ထောက်ခံကြောင်းနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း (ခုံ) အနည်းဆုံး-ရင်ပြင်လိုင်း-of အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ကြွက် (10 ရက်ဆက်တိုက်ကျော် 5% ±) ICSS တံခါးခုံများအတွက်တည်ငြိမ်မှုစံမပြည့်စုံသောအခါ, မူးယစ်ဆေးကုသမှု၏သက်ရောက်မှုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ SB334867 (Scripps ဖလော်ရီဒါ) သို့မဟုတ် DMSO မော်တော်ယာဉ်တစ် Hamilton ကပြွတ် (0.1 mL / ကီလိုဂရမ် ip) ကို အသုံးပြု. အခြားရက်ပေးခဲ့သည်များနှင့်တံခါးချက်ချင်း 15-မိစမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများအတွက် quantified ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ norBNI (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip; Sigma) ICSS စမ်းသပ်ခြင်းရဲ့ start မတိုင်မီဆား (10 mL / ကီလိုဂရမ်) 48 ဇ၌ပေးသောခဲ့သည်။
အဆိုပါ 5-CSRTT ။
(ကြွက် (အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှုအလေးချိန်၏ 85% အထိ) အစားအစာ-ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်သောအော်ပရေတာအခန်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်အတွင်းပိုင်းလေဝင်လေထွက်, အသံ-attenuating ပုံး (Med Associates မှ) သျောနှင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 5-CSRTT လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထွက်သယ်ဆောင်25) ။ (ကီလိုဂရမ် 334867 mL / ဆားထဲမှာ; Sigma) (DMSO, 0.1 mL / ကီလိုဂရမ်အတွက်) နှင့် / သို့မဟုတ်ကင်း SB1 သည်အခြားစမ်းသပ်ချက်၌ရှိသကဲ့သို့, စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ ip ဆေးထိုး 10 မိနစ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်နှင့် norBNI ယင်းမတိုင်မီ 48 ဇအနည်းဆုံးပေးထားခဲ့သည် စမ်းသပ်ခြင်းများက start (SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ, အဆိုပါ 5-ရှေးခယျြမှု Serial တုံ့ပြန်မှုအချိန် Task ကို).
ကြွက်နှင့်ကြွက် (ထူထောင်လုပျထုံးလုပျနညျးအရသိရသည်တစ်ခု isoflurane (1-3% Vol / vol) အောက်စီဂျင်အခိုးအငွေ့အရောအနှောတွေနဲ့ anesthetized နှင့်ခွဲစိတ်သည့် jugular သွေးကြောထဲမှာ Silastic (VWR သိပ္ပံ) ပြွန်နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်54) ။ ကြွက်များတွင်ပြွန် implantation ပြီးနောက်ချက်ချင်းနှစ်နိုင်ငံသံမဏိလမ်းညွှန်စည် (23 gauge, အရှည် 17 မီလီမီတာ) (bregma ထံမှ: AP, 5.3 မီလီမီတာ; ML, ± 0.7 မီလီမီတာ; DV, -7.5 မီလီမီတာ dura ထံမှ VTA) တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် ) ။ တည်ငြိမ်သောကိုကင်းစားသုံးမှုအောင်မြင်ပြီးနောက် ၆၀ မိနစ်နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအတွင်း SB334867 သို့မဟုတ် norBNI နှင့်စစ်ဆေးခြင်းကို (၃ ရက်ဆက်တိုက်တုန့်ပြန်မှု၏ ၂၀% ကွဲပြားမှု; SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ, IV ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး).
ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ICSS စမ်းသပ်ချက်အဘို့, Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA SB334867-ကုသနှင့် norBNI + SB334867-ကုသအခြေအနေများအကြားနည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ Newman က-Keuls post ကို hoc စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ one-way ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA SB334867 နှင့် norBNI + SB334867 အခြေအနေများအတွင်းနည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ANOVA နှင့် Newman က-Keuls စမ်းသပ်မှုအားလုံး 5CSRTT စမ်းသပ်ချက်အတွက်နည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည် one-way ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ။ ANOVA, နွားနှင့်အတူကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစမ်းသပ်ချက်များတွင်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားနည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ1R ကို KO ကြွက်။ ANOVA နှင့် Newman က-Keuls စမ်းသပ်မှု VTA DA အာရုံခံခြင်းဖြင့် orexin နှင့် dynorphin မှယုတ်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် one-way ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ။ one-way ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA နှင့် Newman က-Keuls စမ်းသပ်မှုလည်း SB334867 နှင့် norBNI နဲ့ကုသကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှု၏နည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကွာခြားချက်များလျှင်သိသာစဉ်းစားခဲ့ကြ P <0.05 ။
ကျနော်တို့အချက်အလက်ကောက်ယူမှုအတွက်အကူအညီအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နှင့် Miranda အက်စ်ဂါလိုနှင့်အမျိုးသမီး Melissa ချန်အပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်များဒေါက်တာ Garrett Fitzmaurice ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကို WAC မှ (။ PJK မှ) R32-DA026250, (ထာဝရဘုရားသည်ရန်) ကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ရေး F99-DA031767 နှင့် (JWM မှ) K32-DA024932 အမျိုးသား Institutes, F99-DA031222 နှင့် K01-DA023915 ကထောက်ခံနှင့် R01-MH063266 (ခဲ့သည် ) နှင့် SLB ရန်သဘာဝသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုထောက်ပံ့ငွေ () သည်။
အကျိုးစီးပွားကြေညာချက်၏ပဋိပက္ခ: WAC (အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့် 6,528,518; Assignee: McLean ဆေးရုံ) ကမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူစိတ်ကျရောဂါမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက် Kappa-opioid ရန်များအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော။ အားလုံးသည်အခြားစာရေးဆရာများအဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားများကိုဘော်ပြရမည်။
စာမျက်နှာပေါ်တွင် Commentary ကိုကြည့်ပါ 5765.
1 ။ Adamantidis AR, Zhang က F ကို, Aravanis လေး, Deisseroth K ကို hypocretin အာရုံခံ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပျေါနိုးထ၏က de Lecea အယ်လ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ သဘာဝ။ 2007; 450 (7168): 420-424 ။ [PubMed]
2 ။ et al Borgland SL ။ Orexin A / hypocretin-1 ရွေးချယ်အပြုသဘောစစ်ကူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29 (36): 11215-11225 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Sharf R ကို, et al ။ အဆိုပါ orexin 1 အဲဒီ receptor ကနေတဆင့်ပြ Orexin အစားအစာအားဖြည့်များအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာ mediates ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67 (8): 753-760 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ JW, Dominguez JM, Sato သည် SM, Shen RY, Hull က EM Muschamp ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် hypocretin တစ်အခန်းကဏ္ဍ (orexin) ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27 (11): 2837-2845 ။ [PubMed]
5 ။ Borgland SL, Taha လုပ် SA, Sarti က F, Fields HL, အ VTA အတွက် Bonci အေ Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 49 (4): 589-601 ။ [PubMed]
6 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437 (7058): 556-559 ။ [PubMed]
7 ။ Peyron ကို C, et al ။ မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကို်အာရုံခံ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18 (23): 9996-10015 ။ [PubMed]
8 ။ et al Marcus ဖြစ်မှု။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin receptors 1 နှင့်2၏ differential စကားရပ်။ J ကို comp Neurol ။ 2001; 435 (1): 6-25 ။ [PubMed]
9 ။ Bruchas MR, မြေ BB, Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်လိုလားသူစွဲလမ်းအပြုအမူတွေတစ် modulator တွေကိုအဖြစ် dynorphin / Kappa opioid စနစ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 1314: 44-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ ကာရိုး FI, Carlezon WA ။ , κ opioid အဲဒီ receptor ရန်၏ Jr ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ J ကို Med Chem ။ 2013; 56 (6): 2178-2195 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ Chavkin ကို C, ယာကုပ်လျှင်, တိန်းအေ Dynorphin အဆိုပါ Kappa opioid အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် endogenous ligand ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ။ 1982; 215 (4531): 413-415 ။ [PubMed]
12 ။ Bruijnzeel AW ။ Kappa-Opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကို။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2009; 62 (1): 127-146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Wee က S, Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် dynorphin-Kappa opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 2010; 210 (2): 121-135 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Shippenberg TS, Zapata တစ်ဦးက, Chefer VI ကို။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ pathophysiology ။ Pharmacol Ther ။ 2007; 116 (2): 306-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Zhang က Y ကို, Butelman ER, Schlussman SD, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ striatal dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့် C1BL / 17J ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအတွက်ကိုကင်း-evoked တိုးအပေါ်တစ်ဦး (57-6) dynorphin အဆိုပါ endogenous Kappa opioid agonist ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172 (4): 422-429 ။ [PubMed]
16 ။ လီ Y ကို, ဗန်တွင်း Pol AN ။ coexpressed inhibitory dynorphin နှင့် excitatory hypocretin / orexin neuropeptides ၏ differential ပစ်မှတ်-မှီခိုလုပ်ရပ်တွေကို။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26 (50): 13037-13047 ။ [PubMed]
17 ။ Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008; 59: 29-53 ။ [PubMed]
18 ။ et al Chou TC ။ Orexin (hypocretin) အာရုံခံ dynorphin ဆံ့။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21 (19): RC168 ။ [PubMed]
19 ။ Bamford NS, et al ။ Heterosynaptic dopamine neurotransmission corticostriatal ဆိပ်ကမ်း၏အစုံရွေးချယ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 42 (4): 653-663 ။ [PubMed]
20 ။ Carlezon WA, Jr က Chartoff Eh ။ Intracranial Self-stimulation (ICSS) လှုံ့ဆျောမှု၏ neurobiology လေ့လာဖို့ကြွက်၌တည်၏။ နတ် Protoc ။ 2007;2(11): 2987-2995 ။ [PubMed]
21 ။ et al Riday TT ။ Orexin-1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းဆွစ်ဇာလန်-Webster ကြွက်တွေမှာကိုကင်းများ၏အကြိုးအာနိသင်ကိုလျှော့ချမထားဘူး။ ဦးနှောက် Res ။ 2012; 1431: 53-61 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ လို့ McGregor R ကို, Wu MF, ဘာဘာ, G, Ramanathan L ကို, Siegel JM ။ hypocretin ၏မြင့်မားတိကျသောအခန်းကဏ္ဍ (orexin) အာရုံခံ: diurnal အဆင့်တစ် function ကိုအဖြစ် Differential activation, Operations ရှောင်ရှားခြင်းနဲ့အလင်းအဆင့်ကိုနှိုင်းယှဉ်အော်ပရေတာအားဖြည့်။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31 (43): 15455-15467 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ပစ်မှတ်နှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်က de ကျေးအိပ်ချ် Impulse: နောက်ခံဖြစ်စဉ်များ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009; 14 (1): 22-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Winstanley, CA, Olausson P ကို, တေလာ JR, Jentsch JD ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကနေ Impulse နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတို့အကြားဆက်ဆံရေးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2010; 34 (8): 1306-1318 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ Bari ကတစ်ဦး, Dalley JW, Robbins TW ။ ကြွက်များတွင်အမြင်အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်၏အကဲဖြတ်များအတွက် 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်များ၏လျှောက်လွှာ။ နတ် Protoc ။ 2008;3(5): 759-767 ။ [PubMed]
26 ။ Robbins TW ။ အဆိုပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်: အပြုအမူဆေးဝါးဗေဒနှင့် functional neurochemistry ။ Psychopharmacology (Berl) 2002; 163 (3-4): 362-380 ။ [PubMed]
27 ။ Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35 (1): 217-238 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ အဆိုပါ orexin 1 အဲဒီ receptor မှာအချက်ပြ Smith က RJ, ကြည့်ရှု RE, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Orexin / hypocretin cue-ရူးနှမ်းကိုကင်း-ရှာထိန်းညှိ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009; 30 (3): 493-503 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Boutrel B, et al ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် hypocretin များအတွက်အခန်းက္ပ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2005; 102 (52): 19168-19173 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ et al နာရီတာ M က။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26 (2): 398-405 ။ [PubMed]
31 ။ Holland ဂျာလူးမေး, ကင်မရွန် MD, Kamenecka TM, Kenny PJ ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် hypocretin ဂီယာနီကိုတင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2008; 105 (49): 19480-19485 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ လောရင့် AJ, Cowen က MS, ယန် HJ, ချန်က F, Oldfield ခအဆိုပါ orexin system ကိုကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံထိန်းညှိ။ br J ကို Pharmacol ။ 2006; 148 (6): 752-759 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Holland ဂျာ Pham: D, မုဆိုး, CD, Kenny PJ ။ Pharmacological နှင့်အမူအကျင့်မျိုးဗီဇသက်သေအထောက်အထား: Hypocretin-1 receptors ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်-တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိ။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2012; 6: 47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ အိုးထိန်းသမား DN, Damez-Werno: D, Carlezon WA, Jr က Cohen ကို BM, Chartoff Eh ။ တစ်ဦးက salvinorin အဆိုပါκ-opioid အဲဒီ receptor agonist မှထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့ extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase နှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကို modulates ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 70 (8): 744-753 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ Korotkova TM, Sergeeva oa, Eriksson KS, Haas HL, Brown က RE ။ orexins / hypocretins အားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic နှင့် nondopaminergic အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (1): 7-11 ။ [PubMed]
36 ။ Margolis eb, Hjelmstad GO, Bonci တစ်ဦးက, Fields HL ။ Kappa-opioid agonists တိုက်ရိုက် midbrain dopaminergic အာရုံခံတားစီး။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (31): 9981-9986 ။ [PubMed]
37 ။ Fadel J ကို, Deutch AY ။ orexin-dopamine interaction က၏ခန္ဓာဗေဒအလွှာ: အ ventral tegmental ဧရိယာမှ Lateral hypothalamic စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 2002; 111 (2): 379-387 ။ [PubMed]
38 ။ Torrealba က F, Carrasco MA ။ အီလက်ထရွန် microscopy နှင့် neurotransmitter စနစ်များအပေါ်တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2004; 47 (1-3): 5-17 ။ [PubMed]
39 ။ Bruchas MR, Chavkin C. Kinase ကက်စကိတ်နှင့် ligand-ဒါရိုက်တာ Kappa opioid အဲဒီ receptor မှာအချက်ပြ။ Psychopharmacology (Berl) 2010; 210 (2): 137-147 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Sharf R ကို, Sarhan M က, Dileone RJ ။ မှီခိုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် orexin / hypocretin ၏အခန်းက္ပ။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 1314: 130-138 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Todtenkopf က MS, Marcus JF, Portoghese PS, Carlezon WA ။ , ကြွက်များတွင် intracranial Self-stimulation အပေါ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ligands ၏ Jr အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172 (4): 463-470 ။ [PubMed]
42 ။ Tomasiewicz HC, Todtenkopf က MS, Chartoff Eh, Cohen ကို BM, Carlezon WA ။ , Jr ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်၏ Kappa-opioid agonist U69,593 လုပ်ကွက်ကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 64 (11): 982-988 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Bals-Kubik R ကို, Ableitner တစ်ဦးက, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ ကြွက်များတွင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းခြင်းဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်အဖြစ် opioids များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေ Neuroanatomical ဆိုဒ်များ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1993; 264 (1): 489-495 ။ [PubMed]
44 ။ Diurnal လွှမ်းမိုးမှု: Moorman DE, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Orexin / hypocretin prefrontal activation မှ ventral tegmental dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်မှု modulates ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30 (46): 15585-15599 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Mahler SV, Smith က RJ, Aston-ဂျုံးစ် G. အဆက်သွယ်မှုသည်ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် VTA orexin နှင့်အချိုမှုအကြား။ Psychopharmacology (Berl) 2013; 226 (4): 687-698 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ et al ပေါ်တာ RA ။ 1,3-Biarylureas အဆိုပါ orexin-1 အဲဒီ receptor ၏ရွေးချယ် Non-peptide ရန်အဖြစ်။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2001; 11 (14): 1907-1910 ။ [PubMed]
47 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59 (1): 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 ။ Lutter M က, et al ။ Orexin အချက်ပြကယ်လိုရီကန့်သတ်များ၏လက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28 (12): 3071-3075 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49 ။ Nocjar ကို C, Zhang က J ကို, Feng တို့ P ကို, Panksepp ဂျေစိတ်ကျရောဂါ၏လူမှုရေးရှုံးနိမ့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ် dopamine စနစ်၏ mesocortical ဒေသများတွင် orexin ၏လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်ကိုပြသလျက်, hypothalamus အတွက် dynorphin နှင့် orexin ၏။ neuroscience ။ 2012; 218: 138-153 ။ [PubMed]
50 ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်ကော်မတီ။ ယင်းပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ကိုလမ်းပြ။ Bethesda: Natl Inst ကနျြးမာရေး, 1985 ။ DHHS Publ အမှတ် (NIH) 85-23 ။
51 ။ ရီ H ကို, Leunissen J ကို, ရှီ, G, Gutekunst ကို C, အ ultrastructural အဆင့်မှာ Pre-မြှုပ်ထားခြင်းကို double immunogold-, ငွေတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့အ Hersch အက်စ်တစ်ဦးကဝတ္ထုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ J ကို Histochem Cytochem ။ 2001; 49 (3): 279-284 ။ [PubMed]
52 ။ Ford ကားက CP, Beckstead MJ, Williams က JT ။ somatodendritic dopamine inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း၏ Kappa opioid တားစီး။ J ကို Neurophysiol ။ 2007; 97 (1): 883-891 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ စမတ်: D, et al ။ FLIPR သုံးပြီးတရုတ်ဟမ်းစတား Ovary ဆဲလ်လိုင်းအတွက် recombinant လူ့ orexin အဲဒီ receptor ဆေးဝါးဗေဒ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ br J ကို Pharmacol ။ 1999; 128 (1): 1-3 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ မုဆိုး CD ကို, Lu ကမေး, ဂျွန်ဆင် pm တွင်, Marks MJ, Kenny PJ ။ ထိန်းချုပ်မှုနီကိုတင်းစားသုံးမှုအချက်ပြ Habenular α5နီကိုတင်းအဲဒီ receptor subunit ။ သဘာဝ။ 2011; 471 (7340): 597-601 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]